गीत सुनाउँदै बिरामी जाँच्छु – सिधा अनलाइन खबर
सिधा अनलाइन खबर
सत्य तथ्य अनि खोजमुलक खबर
गीत सुनाउँदै बिरामी जाँच्छु
Sidha Kura | December 28, 2018 | Comments
काठमान्डौ , नेपाल आइडल सिजन टुको उत्कृष्ट १० मा आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गरे, पोखराकी नीलिमा थापा र झापाकी अस्मिता अधिकारीले। गत वर्ष प्रमिला राई, सन्ध्या जोशी, सुजाता पाण्डे र केन्जल श्रेष्ठ गरी चारजना उत्कृष्ट १० मा थि ए। महिलालाई सिंगिङ रियालिटी सोमा अगाडि बढ्न कत्तिको अप्ठ्यारो छ ? संगीतमा महिलाको संख्या किन कम छ ? पेसाले नर्स नेपाल आइडल सिजन टुकी थर्ड रनरअप अस्मिता अधिकारी यसो भन्छिन उनकै सब्द मा:म सानैदेखि गीत गाउन रुचाउँथेँ। बीए स्सी नर्सिङ सकाएर यसै बसेको बेला नेपाल आइडलको फर्म खुल्यो।
फर्म भरेँ, गीत गाएँ, जजहरूको राम्रो प्रतिक्रिया पाएँ।रिजल्टभन्दा पनि संगीत सिक्न भनी म आइडलमा आएकी थिए। यहाँसम्म आउँछु भन्ने थिएन। अत्यन्तै खुसी लागेको छ। देशविदेशमा मेरो स्वर मन पराउने फ्यानहरू भेटेकी छु। मेरो परिचय फेरिएको छ। परि वारले पनि निकै सहयोग गरे।महिलाहरू खुलेर संगीतमा आउने वातावरण अझै बनिसकेको छैन। गीत गाउनु, रियाज गर्नु र यसका प्राविधिक कुराहरू सिक्नु अत्यन्तै कठिन काम हो। कति क्षमता भएका साथीहरूलाई त यो क्षेत्रमा आउनै गाह्रो छ। धेरै महिला त आफ्नो चाहना मारेर बस्न बाध्य छन्।
स्वर राम्रो भए पनि कतिपय महिलाको संगीतप्रति लगाव छैन। पहिलो कुरा त आफूभित्रै नै चाहना हुनुपर्‍यो, संगीतप्रति लगाव हुनुपर्‍यो।करिब आठ÷नौ महिनाको समय त मैले आफ्नो व्यक्तिगत जिन्दगी सबै बिर्सिएँ। रातदिन रियाजमा खटिएँ। आफ्नो प्रस्तुति कसरी फरक र उत्कृष्ट बनाउने भनेरै हरपल सोच्ने गर्थें। आफूमा के कमजोरी छ, त्यो हटाउनेतिर लागेँ। बाल्यकालदेखि नै म भजन गाउँथेँ। गाउँघरमा धेरैको प्रशंसा पनि पाएकी छु, भजन गाएर। टाइटल विजेता चुन्ने अधिकार त जजलाई भन्दा पनि दर्शकलाई नै बढी थियो।
म निकै डुब्छु संगीतमा।पुरुष भएकाले विजेता बनेभन्दा पनि तुलनात्मक रूपमा महिला गायिकाहरूले भन्दा राम्रो गाएर विजेता बनेका हुन् भन्ने लाग्छ मलाई। अर्को कुरा महिलाको क्षमतामा विश्वास गर्ने, अगाडि बढ्न उनीहरूलाई सहयोग गर्ने समाज अझै बनिसके को छैन।महिलाले पनि सांगीतिक क्षेत्रमा निकै राम्रो गरिरहेका छन्। दर्शकको रोजाइमा पुरुष परे।पढाइ नर्सिङ तर रहर गीत गाउने दुवै फरक विधा हुन्। तर, अप्ठ्यारो लागेको छैन मलाई। दुवै कामलाई सँगसँगै लैजाने योजना छ। सेवाका लागि नर्सिङ र रुचि को विषय गायन। गीत सुनाउँदै बिरामीको उपचार गर्छु।
अ*लविदा पर्दाकी आमा ! सुभद्रा अधिकारीको अ*न्त्येष्टिमा शो*कमग्न आ*र्यघाट
सञ्जय दत्तकी छोरीको ‘ब्याइफ्रेन्ड’को मृ**त्यु
फुटपाथमै कपडा किन्छिन् अजय देवगणकी पत्नी काजोल
बिना छत बिना पर्खालको एक होटल, जसले लोभ्याउने छ तपाईको मन
मुकेश अम्बानीकी छोरीको बिहेमा हिलारी क्लिन्टन
क्यान्सर पीडित बलिउड नायिका सोनाली घर फर्कने
काठमाडौंमा रोकिएन टिपर आ*तंक, टिपरका कारण हुने दु*र्घटना बर्सेनि बढ्दो
२५ करोड बक्यौता नबुझाउने विदेशी कम्पनीलाई नै विमानस्थल पुनः ठेक्का
गरिबीले लिँदै ज्या*न, ५ लाख ऋण तिर्न नसक्दा आ*त्महत्या !
रबि लामिछानेको जन्म दिनमा रबि लामिछाने पत्नी निकिताले लेखिन यस्तो मन छुने स्टाटस…
भूकम्पले भत्काएको धरहराको निर्माणले गति लियो ! यस्तो हुने छ धरहरा…
चितवन अपडेट : अ*नुसन्धान फाइल सरकारी वकिलसामु पेश, आजै थु*नछेक बहस सुरु हुने
पार्टीकाे झन्डा ओढेको मान्छेले बोलेको मात्रै सही हुन्छ ? रविकाे लागि सबै एकजुट हाैँ : निखित उप्रेती
रवि लामिछानेलाई थप ५ दिन थु*नामा राख्न अदालतको आ*देश
भरतपुरको चौविसकोठीमा झडप,केही प्रर्दशनकारी प्रहरी नियन्त्रणमा
यसरी सबैको प्रिय बने रबि !